Xaalada Goobihii lagula dagaalamay Saliibiyiinta oo maanta degan iyo Taangigii laga gubay oo Raayada Towxiidka laga dul taagay. | Halganka Online
Xaalada Goobihii lagula dagaalamay Saliibiyiinta oo maanta degan iyo Taangigii laga gubay oo Raayada Towxiidka laga dul taagay.
Waxaa Maanta degan xaalada goobiha maalmihii lasoo dhaafay ay isku fara saareen Ciidamada Wilaayada Islaamiga ah ee Banaadir iyo kuwa Macatab ku dirirka ah ee Yugaandha oo kaashanaya Maleeshiyada Kooxda Riddada ah kuwaas oo Allaah fadligiis Jab Lixaad leh uu soo gaaray.
Ciidamada Mujaahidiinta ah oo Casharo lama ilaawaan ah siiyay Cadawga Allaah ee Kirishtaanka ah ayaa saakay si caadi ah howlahooda Jihaadiga ah u wata, waxayna ku suganyihiin goobihii ay markii hore deganaayeen ee ” Isgoyska Fiat ilaa Kawaankii hore ee Malaayga” oo ah halka ay iska galaan degmooyinka C/Caziiz iyo Shangaani ee Magaalada Muqdisho.
Taangigii laga gubay Saliibiyiinta Yugaandha ayaa weli wuxuu yaalaa halkii uu ku haleelay Hubka Halyeeyada Islaamka, waxaana dusha sare ee Taangiga laga taagay Calankii Towxiidka ee uu Caanka ku ahaaNabigeena Maxammed ” Nabad geliyo iyo Naxariis dushiisa ha ahaatee ” iyo Saxaabadiisa “Allah ha ka wada raali Noqdo” gaar ahaan Xilliyada ay Dagaallada la gelayaan Cadawga.
Afhayeenka Saliibiyiinta ” Beenaale Bahuuko” ayaa dhuumasho dhabarku muuqdo la yimid markii uu sheegay in Taangiga laga gubay ay Cillad dhanka farsamada ah ku timid oo aysan Mujaahidiintu gubin, Balse Shacabka Reer Muqdisho oo ku maadeysanaya Hadalka Gaalka ayaa ugu jawaabay ” Maxaa Taangiga Degmada C/Caziiz Cilladu ugu timid oo aysan ugu imaanin marka uu Airportiga, Dekada ama KM4 ku dul marayo gaadiidka Shacabka Masaakiinta ah “.
Saliibiyiinta Yugaandha oo dhakafaar daran uu hayo ayaa iyaguna waxay ku suganyihiin Agagaarka Hotel Juba, waxayna halkaas ka qodanayaan godad ay ka galaan weerarada Mujaahidiinta, waxaana la arkayaa iyagoo xiray dhammaan wadooyinka soo galaya Hotel Juba oonan xitaa u ogolayn Maleeshiyada Riddada ah. Ugu dambayn, Saliibiyiinta Yugaandha iyo Kooxda Riddada ah ayaa dhex fadhiya wabiyo Fadeexad ah kadib markii uu fashil ka dhashay abaabul ay in kabadan sanad iyo bar ugu goodinayeen Shacabka iyo Mujaahdiinta inay ku xaaqi doonaan, Balse waxaa muuqata in wixii ay ku tashanayeen oo ah Taangiyada Qafilan iyo Taageerada Gaalada Caalamka intaba ay noqotay Hal Bacaad lagu lisay.
Dhanka kale waxaa Guul iyo Gallad Rabi ku Manaystay Shacabka Muslimka ah ee Soomaaliyeed iyo Mujaahidiinta oo Sabar iyo Diyaar garoow badan kadib maanta awood u yeeshay inay dullinimo badaan Gaaladii gardarada ku timid dalkooda, welina u diyaar ah inay ku sabraan wax walba oo dhibaata ah intay doonto ha leekaatee si loo xaqiijiyo in Ummada Soomaaliyeed aysan dullinimo aqbalaynin si ay u noolaadaan oo kaliya, Haal-ku dhegeenuna waa ” WAA INAAN NOOLAANAA ANAGOO MUSLIMIIN XOR AH, AMA AAN DHIMANAA ANAGOO SHUHADA AH”.
« Afhayeen ay leeyihiin Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo maanta La magacaabay. Dagaal Culus oo saaka waabarigii ka dhacay goobihii maalmihii ugu dambeeyay la isku hor fadhiyay ee ku yaala bariga Magaalada Muqdisho »
omar, on Luulyo 7, 2010 at 2:53 g said:
may allah bless the mujaahidiin amiin ya rabi.